Fiphaza iphepha elingemva kokugqunyelelwa usebenzisa i-CSS > UVielhuber uDavid
Fiphaza iphepha elingemva kokugqunyelelwa usebenzisa i-CSS09
Ukuba usebenzisa izinto ezinje ngokugqume (okungumgaqo kumaxesha e-GDPR) kwaye ufuna ukuthambisa indawo esemva kokugqume ngaphezulu, umzekelo, uhlala uhlangabezana nengxaki yomxholo wokuxinana . Umzekelo, ukuba unezinto ezibekwe ngokupheleleyo okanye kwindawo emiselweyo, baya kuthi ngequbuliso baboniswe ngokwahlukileyo ngaphandle kwesihluzi esisetyenzisiweyo. Kodwa kukho isilungiso.
Le khowudi ilandelayo ibonisa lo mzekelo. Ibhokisi ngasemva kufuneka ibekwe phezulu ngasekunene, kodwa ihanjisiwe:
I-W3C ithi ngokucacileyo: "Ayisiyo i-bug, luphawu." . Le iinkcukacha uchaza ubudlelwane:
Ingxoxo ngeGitHub ikwafanele ukufundwa.
Ezi zinto zilandelayo zeCSS zenza umxholo omtsha wokubeka isitokhwe ukuze izinto zomntwana ezizinzileyo okanye ezimileyo zingasaziphathi ngokuhambelana neziko lokujonga, kodwa endaweni yokucoca umzali:
Kodwa kukho isisombululo kwingxaki yoqobo: Ipropathi ye-CSS yangemva- isihluzi (esaziwa ngokuhluza inxenye yendawo ngasemva kwezinto) iyawenza umsebenzi. Umxholo omtsha we-stacking ukwenziwe apha, kodwa oku akunamsebenzi njengoko kungekho zinto zomntwana kwizinto zobuxoki: